“ကွာရှင်းချင်တယ်” | ကွာရှင်းတာ ဖြေရှင်းနည်းလား
နိုးလော့! | ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၁၀
ဖတ်လို ကိုရီးယား ခရိုအေးရှား ချက် ဂရိ ဂျပန် ဂျာမန် စပိန် စလိုဗက် စလိုဗေးနီးယား စီဘွာနို ဆားဗီးယား ဆွာဟီလီ ဆွီဒင် ဇူးလူး တဂါးလော့ တရုတ် မန်ဒရင်း(ခေတ်သုံး) တရုတ် မန်ဒရင်း(ရှေးသုံး) တူရကီ ထိုင်း ဒတ်ချ် ဒိန်းမတ် နော်ဝေ ပိုလန် ပေါ်တူဂီ ပြင်သစ် ဖင်လန် ဘူလ်ဂေးရီးယား မာလဂက်စီ မြန်မာ ယူကရိန်း ရိုမေးနီးယား ရုရှား လစ်သူယေးနီးယား ဟန်ဂေရီ ဟီလီဂေနွန် အက်စတိုးနီးယား အင်ဒိုနီးရှား အင်္ဂလိပ် အယ်လ်ဘေးနီးယား အာဖရိက အာရဗီ အီတလီ အီလိုကို
ပျက်စီးယိုယွင်းနေသော အိမ်သည် လျစ်လျူရှုခံထားရသည်ကို ပြသည်။ ယင်းအိမ်သည် နှစ်များတစ်လျှောက် မုန်တိုင်းများစွာမှ လွတ်မြောက်ခဲ့သော်လည်း အားလုံးကိုတော့ မဟုတ်ပါ။ ယခု အဆောက်အအုံမှာ ယိုင်နဲ့နေပြီး ပြိုလဲတော့မည့်ပုံ ပေါက်နေပြီ။
ယင်းမြင်ကွင်းသည် ယနေ့အိမ်ထောင်များစွာ၏ အခြေအနေကို ဖော်ပြနေသည်။ သင့်အိမ်ထောင်ရေးသည်လည်း ထပ်တူအခြေအနေသို့ ဦးတည်နိုင်ကြောင်း ခံစားဖူးပါသလော။ ယင်းသို့ခံစားရပါက ပြဿနာမရှိသည့် စုံတွဲဟူ၍ မရှိသည်ကို ယုံကြည်စိတ်ချပါ။ အမှန်မှာ၊ အိမ်ထောင်သည်များသည် ‘‘ကာယဆင်းရဲဒုက္ခကို’’ ခံရဖွယ်ရှိကြောင်း သမ္မာကျမ်းစာက လက်တွေ့ကျကျ အသိအမှတ်ပြုသည်။—၁ ကောရိန္သု ၇:၂၈၊ ကဘ။
သုတေသီအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့က အိမ်ထောင်ရေးကို ဤသို့ဖော်ပြကာ ယင်းစကားများ၏ မှန်ကန်မှုကို မီးမောင်းထိုးပြသည်– “ကျွန်ုပ်တို့၏ လူ့အဖွဲ့အစည်းရှိ လူအများဆုံးသည် အရဲစွန့်ရလွန်းသော တာဝန်ကြီးကို လက်ခံရယူလေ့ရှိသည်။” သူတို့ ဤသို့ထပ်ဖြည့်စွက်သည်– “များစွာသောရွှင်လန်းမှု၊ ကတိစကားနှင့်စခဲ့သော ဆက်ဆံရေးတစ်ခုသည် လူတစ်ဦး၏ ဘဝအသက်တာတွင် စိတ်ပျက်စရာနှင့် နာကျင်ဒုက္ခ အဖြစ်စေဆုံးအရာ ဖြစ်သွားနိုင်သည်။”
သင့်အိမ်ထောင်ရေးကော အသို့နည်း။ အောက်ဖော်ပြပါ စရိုက်လက္ခဏာများထဲမှ တစ်ခု သို့မဟုတ် ထို့ထက်ပိုရာများကြောင့် အိမ်ထောင်ရေးထိခိုက်နေသလော။
သင့်အိမ်ထောင်ရေးသည် ယိုင်နဲ့ပြီး ပြိုလဲတော့မည့်ပုံပေါက်ပါက သင်အဘယ်အရာ လုပ်သင့်သနည်း။ ကွာရှင်းခြင်းသည် ဖြေရှင်းနည်းလော။
နိုင်ငံအချို့တွင် ကွာရှင်းမှုနှုန်းသည် တစ်ဟုန်ထိုး တိုးများလျက်ရှိသည်။ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကို သုံးသပ်ကြည့်ပါ၊ ယင်းနိုင်ငံတွင် ကွာရှင်းမှုသည် နှစ်ပေါင်းများစွာအထိ အတော်ပင် ဖြစ်ခဲသောအရာ ဖြစ်ခဲ့သည်။ သို့သော် ၁၉၆၀ ပြည့်နှစ်နောက်ပိုင်းတွင် “ကွာရှင်းမှုနှုန်းသည် အံ့သြလောက်အောင် လျင်မြန်စွာ တိုးလာ” သည်ဟု ဘာဘရာ ဒီဖိုး ဝှိုက်ဟက်က သူ့စာအုပ် (The Divorce Culture) တွင် ရေးသားထားသည်။ သူဤသို့ ဖော်ပြသည်– “ကွာရှင်းခြင်းသည် အကြမ်းဖျင်းအားဖြင့် ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုတွင် နှစ်ဆတိုးလာခဲ့ပြီး ဆက်၍ တိုးများလာကာ ၁၉၈၀ ပြည့်လွန်နှစ် ရောက်သောအခါ တည်ငြိမ်သွားသည့်တိုင် ယင်းသည် တိုးတက်သော အနောက်နိုင်ငံ လူ့အဖွဲ့အစည်းများ အတွင်းတွင် အမြင့်ဆုံးအဆင့် ဖြစ်သည်။ ဤ ရုတ်တရက်တိုးများပြီး တည်ငြိမ်သွားခြင်း၏ အကျိုးဆက်အနေနှင့် အနှစ်သုံးဆယ် အတွင်းပင် ကွာရှင်းမှုသည် အမေရိကန်လူမျိုးတို့၏ အသက်တာ၌ မဖြစ်စလောက်မှ ခေတ်ရေစီးကြောင်း ဖြစ်သွားသည်။”
အိမ်ထောင်ရေး အိမ်ထောင်ရေးနဲ့ မိသားစု
မျက်နှာဖုံး​အကြောင်းအရာ ကွာရှင်းခြင်းနှင့်ပတ်သက်ပြီး သိသင့်သောအချက် လေးချက်
မျက်နှာဖုံး​အကြောင်းအရာ သင့်အိမ်ထောင် မပြိုကွဲအောင် ကြိုးပမ်းနိုင်မည်လော
နိုးလော့! ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၁၀